Sebenzisa Lezi Zeluleko Namathuluzi Ukunqoba Umsebenzi Wakho Wokumaketha | Martech Zone
Uma ufuna ukuphatha kahle umthwalo wakho wokumaketha, kufanele wenze umsebenzi ongcono wokuhlela usuku lwakho, uphinde uhlole inethiwekhi yakho, wakhe izinqubo ezinempilo, futhi usebenzise amapulatifomu angasiza.
Sebenzisa ubuchwepheshe obukusiza ukuthi ugxile
Ngoba ngingumfana wezobuchwepheshe, ngizoqala ngalokho. Angiqiniseki ukuthi yini engingayenza ngaphandle I-Brightpod, uhlelo engilusebenzisela ukubeka phambili imisebenzi, ukuhlanganisa imisebenzi ibe mlando, futhi ngigcine amaklayenti ami azi ngenqubekela phambili eyenziwa amaqembu ethu. Ingxenye yokugcina ibucayi - ngivame ukuthola ukuthi lapho amaklayenti ebona isimo samanje samaphrojekthi nokusilela emuva ngokubukeka, ajwayele ukuhlehla kwizicelo ezingeziwe. Ngokwengeziwe, kunginikeza ithuba elimangalisayo lapho kuphakama izingqinamba eziphuthumayo zokusebenza namakhasimende ami ukuthi ngabe bafuna ukukhuphula isabelomali ukuze babhekane naso, noma sigudluza izinto eziseqhulwini bese sibuyela emuva ezinsukwini ezibekiwe kokunye ukwenziwa.
Kanye nokuphathwa kwephrojekthi, ukuphathwa kwekhalenda bekulokhu kugxekwa. Anginemihlangano yasekuseni (funda ngalokhu ngokuhamba kwesikhathi) futhi ngilinganisela imihlangano yami yokuxhumana nabantu usuku olulodwa ngesonto. Ngiyakuthanda ukuhlangana nabantu, kepha isikhathi ngasinye lapho ngixhawulana khona… kuholela ekusebenzeni okuningi epuletini lami. Ukuvimbela ikhalenda lami bekubaluleke kakhulu ekuzuzeni isikhathi emuva ukuze umsebenzi wokukhulisa imali uphele.
Sebenzisa ukuhlela izinhlelo ukuxoxisana nokusetha izikhathi zemihlangano. Ukubuyela emuva nangaphandle kwama-imeyili ekhalenda kuwukuchitha isikhathi ongasakudingi. Nginayo eyodwa eyakhelwe ebhodini lengxoxo yesayithi lami Ukushayela.
Qedela Imisebenzi Yakho Eyinkimbinkimbi Ekuseni
Ngangivame ukubheka i-imeyili yami njalo ekuseni. Ngeshwa, ukugeleza akuzange kume usuku lonke. Ngeza izingcingo nemihlangano ehleliwe, futhi ngivame ukuzibuza ukuthi ngabe kukhona engikwenzile usuku lonke. Ngabe ngishisa amafutha ophakathi kwamabili ngizama ukuthola futhi ngilungiselele usuku olulandelayo. Kusukela lapho ngibuyise usuku lwami - ngisebenza ku-imeyili nakuvoyisimeyili kuphela ngemuva kokuphothula imisebenzi ebalulekile yosuku.
Ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi abantu kufanele bazame ukwenza imisebenzi emikhulu ekuseni. Ngokusebenzisa leli qhinga, abathengisi bangagxila kubo futhi basuse iziphazamiso (ngivame ukusebenza ekhaya ekuseni ngocingo ne-imeyili yami kuvaliwe). Hambisa imisebenzi yakho emincane ngemuva kuka-1: 30 ntambama, futhi uzonciphisa amazinga akho okucindezeleka, wehlise imiphumela yokukhathala, futhi wandise inani lemisebenzi ebalulekile ezokugcina uphumelela.
Okokugcina, kunjalo isayensi! Ngemuva kosuku olukhiqizayo nobusuku obuhle bokulala, ubuchopho bomuntu bunezinga eliphakeme kakhulu le-dopamine. I-Dopamine iyinhlanganisela ethuthukisa ukugqugquzela, ingathuthukisa amandla, futhi ithuthukise ukucabanga okubucayi. Lapho uqeda imisebenzi emikhulu, ubuchopho bakho buphinde bukhiqize i-norepinephrine eyengeziwe, into engokwemvelo ethuthukisa ukugxila, ukukhulisa umkhiqizo nokukwehlisa ukucindezeleka. Uma unenkinga yokuzibophezela kuphrojekthi usuku lonke, futhi usebenze kuze kube sebusuku ukuthinta ukulala kwakho, mhlawumbe uvuka uvila futhi ungakhuthazi. Lawula i-dopemine yakho ukuze ulawule isisusa sakho!
Ungalingwa - klomelisa ukusebenza kwakho kanzima ngokuhlola imithombo yezokuxhumana kanye ne-imeyili ngemuva kokuthi usuqedile ngephrojekthi yakho yasekuseni noma amaphrojekthi. Uyomangala ukuthi izinsuku zakho ziyoba zinhle kanjani!
Imininingwane Yomlando Wakho
Ngangivame ukuqagela ukuthi ngingenza kanjani kumaphrojekthi amakhulu. Ngiqala ngezinhloso, ngakhe umgwaqo wokufeza lezo zinhloso, bese ngisebenza esinyathelweni ngasinye. Njengoba ngisebenza namakhasimende, ngihlala ngimangazwa ukugxila kwabo noma ukukhathazeka kwabo esingasebenzi okwamanje. Ngikhathazekile ngeSinyathelo 1, babuza ngeSinyathelo 14. Ngihlala nginciphisa amaklayenti ami ukuthi abuyele emuva emsebenzini asewenzile. Lokhu akusho ukuthi asisheshe beshesha, sihlala sihlola isu lethu maqondana nezinhloso bese sizilungisa ngokufanele.
Yini imigomo yakho? Ngabe zihambisana nezinhloso zenhlangano yakho? Ngabe izinhloso zakho zizoqhubekisela phambili umkhiqizo wakho? Umsebenzi wakho? Iholo lakho noma imali engenayo? Ukuqala ngezinhloso zakho engqondweni kanye nemininingwane yemisebenzi yokushaya lezo zikhathi ezibalulekile kuletha ukucaca osukwini lwakho lomsebenzi. Kulo nyaka odlule, ngisike ubudlelwano obubalulekile, imicimbi ebalulekile, namakhasimende akhokha kakhulu lapho ngibona ukuthi ayengiphazamisa emigomweni yami yesikhathi eside. Kunzima ukuba nalezo zingxoxo nabantu, kepha kubalulekile uma ungathanda ukuphumelela.
Ngakho-ke, imininingwane yemikhondo yakho emikhulu, khomba imisebenzi ezokuyisa lapho, khomba iziphazamiso ezikumisayo, futhi uthole isiyalo ngokugcina uhlelo lwakho olukhulu! Lapho unokucacelwa kokuthi kungani wenza lokhu okwenzayo nsuku zonke, ukhuthazeka kakhulu futhi awucindezelekile.
Shintsha konke okuphindayo
Ngiyakudelela ukwenza okuthile kabili, ngenza ngempela. Nasi isibonelo… esikhathini sokuphila kwami ​​ngisebenza namaklayenti ami ngamunye, ngivame ukuchitha isikhathi ngisebenza nabasebenzi babo bokuhlela bangaphakathi ekusebenziseni izinjini. Esikhundleni sokwenza isethulo isikhathi ngasinye, nginezindatshana ezimbalwa engizigcina zisesikhathini kusayithi lami ezingabhekisela kuzo. Okungathatha izinsuku, imvamisa kuthatha ihora noma ngaphezulu ngoba ngibhale imininingwane eningiliziwe ukuze babhekise kuyo.
Izifanekiso zingumngani wakho! Nginezifanekiso zokuphendula izimpendulo ze-imeyili, nginezifanekiso zokwethulwa ngakho-ke akudingeki ngiqale okusha kuzo zonke izethulo, nginezifanekiso zokuphakamisa konke ukuzibandakanya engisebenza nakho. Nginama-templates amakhulu kanye nama-template akhelwe ukwethulwa nokwakhiwa kwamasayithi amaklayenti. Akugcini nje ukungisindisa ithani lesikhathi, kubuye kube ngcono ngawo wonke amaklayenti njengoba ngiqhubeka ngiwathuthukisa ngokuhamba kwesikhathi.
Impela, izifanekiso zithatha isikhashana esengeziwe ngaphambili… kepha zikongela imali eshisiwe phansi komgwaqo. Le yindlela esithuthukisa ngayo amasayithi, futhi siwathuthukisa benethemba lokuthi uzokwenza ushintsho olukhulu ngesonto elizayo. Ngokwenza umsebenzi ongaphambili, izinguquko ezisezansi zithatha isikhathi esincane kakhulu nomzamo.
Enye indlela yesifanekiso esiyisebenzisayo ukuhlela amaklayenti ethu izibuyekezo zezokuxhumana. Sivame ukuqoqa izibuyekezo, siziqondanise nekhalenda, siphinde simise unyaka wonke wezibuyekezo zabalandeli babo ukuthi bazigaye. Kuthatha kuphela usuku noma ngaphezulu - futhi amaklayenti ethu ayamangala ukuthi sithathe unyaka nje sizibuza ukuthi bazothumela ini ohlwini lwabo. PS: Siyamthanda umxhasi wethu Ama-Agorapulse izinketho zokwenza ulayini nokuhlela izibuyekezo zomphakathi!
Bulala Ingxenye Yemihlangano Yakho
Imibiko eminingi iphakamise ukuthi imihlangano engaphezu kwamaphesenti angama-50 ayinasidingo. Bheka ezungeze itafula ngesikhathi esizayo uma usemhlanganweni, cabanga ngokuthi yimalini esetshenziswayo kulowo mhlangano emiholweni, bese ubheka umphumela. Ingabe bekufanele? Akuvamile.
Imisebenzi yobuciko ehamba phambili ayikaze yenziwe emhlanganweni, bantu. Ngiyaxolisa kepha ukusebenzisana kumaphrojekthi wokumaketha kuholela kumanani aphansi kakhulu. Uqashe ochwepheshe ukuze benze umsebenzi, ngakho-ke hlukana futhi unqobe. Ngingahle ngibe nezinsiza eziyishumi nambili ezisebenza kuphrojekthi efanayo - eziningi ngasikhathi sinye - futhi kuyaqabukela ngibathola bonke ocingweni olufanayo noma egumbini elilodwa. Sakha umbono, bese sikha izinsiza ezidingekayo ukuze sifike lapho, ngenkathi siqondisa ithrafikhi ukunciphisa ukushayisana.
Uma kulindeleke ukuthi ube khona emhlanganweni, nansi iseluleko sami:
Yamukela isimemo somhlangano kuphela uma umuntu okumemayo echaza kungani bekudinga ukuthi ube khona. Bengisebenza enkampanini enkulu lapho bengisuka khona emihlanganweni engama-40 ngeviki ngehlele ku-2 lapho nje ngitshela abantu ukuthi angikwazi ukuya ngaphandle kokuthi bachaze ukuthi kungani.
Yamukela kuphela imihlangano ene-ajenda echazwe nge inhloso yomhlangano nezikhathi zesabelo ngasinye lomhlangano. Le ndlela ibulala ithani lemihlangano - imihlangano ephindaphindwe kakhulu.
Yamukela kuphela imihlangano nomxhumanisi womhlangano, umgcini wesikhathi somhlangano, kanye nomrekhoda womhlangano. Umxhumanisi udinga ukugcina yonke ingxenye yomhlangano ngesihloko, umgcini wesikhathi ugcina umhlangano ngesikhathi, futhi irekhoda isabalalisa amanothi nohlelo lokusebenza.
Yamukela kuphela imihlangano ephela ngohlelo olunemininingwane lokuthi ngubani ozobe esenzani, nokuthi bazokwenza nini lokho. Bese ubaphendula labo bantu - imbuyiselo ekutshalweni komhlangano wakho isuselwa ekhonweni labo lokuqedela izinto zesenzo ngokushesha. Gwema izinto zesenzo ezisuselwa ethimbeni… uma umuntu engenayo i-task, ngeke yenziwe.
Uma amaphesenti ama-50 emihlangano kungukuchitha isikhathi, kuzokwenzekani ngeviki lakho lomsebenzi uma wenqaba ukuya kwengxenye yalo?
Isikhathi esithathayo ukuzifundisa ukuthi ungenza kanjani okuthile noma uxazulule inkinga ongayijwayele akukhona nje ukuqeda umkhiqizo wakho, kukulahlekisela wena noma inkampani yakho imali eshisiwe. Uma ungusomabhizinisi, wenza imali uma wenza lokho obekufanele ukwenze. Konke okunye kufanele kukhishwe nabalingani. Nginosonkontileka abaningi engibabiza ngakho konke kusuka ezithombeni ezithwebula izithombe, ukwakha ama-imeyili aphendulayo, ukucwaninga nge-infographic yethu elandelayo. Amaqembu engiwahlanganisile angcono kakhulu, akhokhelwa kahle, futhi awakaze angiphoxe. Kuthathiwe iminyaka eyishumi ukuwahlanganisa, kepha bekufanele ngoba ngigxila ekugxileni kulokho okwenza ibhizinisi lami liqhubeke kahle.
Kuleli sonto, isibonelo, iklayenti lize kimi linenkinga ebelisebenza ngayo izinyanga. Ithimba lezentuthuko belichithe izinyanga lisebenza ekwakheni uhlelo futhi manje bebetshela umnikazi webhizinisi ukuthi kuzothatha izinyanga ezimbalwa ukulungisa. Ngoba ngangijwayele ukuhlanganiswa kwazo kanye nochwepheshe embonini, ngangazi ukuthi singayinikeza ikhodi ikhodi encane kakhulu. Ngamadola angamakhulu ambalwa, ipulatifomu yabo isihlanganiswe ngokuphelele… nangokuxhaswa nokuthuthukiswa. Manje iqembu labo lokuthuthuka lingakhululeka ukuthi lisebenze ezindabeni zepulatifomu eziyinhloko.
Yini ekuthatha isikhathi eside ukuqeda? Ubani ongakusiza? Thola indlela ongabakhokhela ngayo futhi uzojabula ngokuthi ukwenzile!
Tags: qoqa izibuyekezoiziciukusatshalaliswa kokukhishwa kwabezindabaisikaliukuqonda komphakathi
Aug 10, 2009 ngo-8: 02 PM
Siyabonga ngethiphu enkulu nge-Tungle. Kade ngiyisebenzisa izinsuku ezimbalwa manje futhi muhle kakhulu! Ngisebenza kumakhalenda e-Google ahlukene ayisikhombisa e-biz yami, umndeni, isikole, isonto, i-HOA nezinye izinhlangano futhi ngithola izingcingo eziningi, ama-imeyili kanye ne-SMS yabantu abafuna ukwazi ukuthi ngikhona yini ukuhlangana. Njengoba ngikhipha izwi lakho konke lokhu kufanele kube yisilondolozi sesikhathi esikhulu kimi futhi ngethemba ukuthi nabo.
I-BTW - kunohlelo lokusebenza lwe-Ning lwalokhu kepha inesiphazamisi kulo izinsizwa ze-Tungle tech ezisebenza kuzo manje. Bathi izolungiswa ezinsukwini ezimbalwa.
Aug 10, 2009 ngo-11: 06 PM
Siyabonga ngokumemeza, Doug! I-Tungle ibilokhu iyithuluzi elihle kimi futhi ngiyajabula ukuthi nawe uyayithanda. Ngibheke phambili emhlanganweni wethu 🙂
Aug 27, 2009 ku-3: 09 AM
Ngiyabonga ngokukhuluma ngeTungle kimi. Kuzwakala njengenkonzo enhle futhi ngizwe abantu abaningi babelana ngokuhlangenwe nakho kwabo okuhle nethuluzi. Kubukeka sengathi kufanele ngizame.